Dablay hubaysan oo gudaha Magaalada Baydhabo ku dishay Wiil Arday ah
Dablay hubaysan oo gudaha Magaalada Baydhabo ku dishay Wiil Arday ah. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay magaladaasi waxa ay ku toogteen Wiil arday ahaa oo ka mid ahaa shacabka degan magaaladaasi.
Dablay ku hubaysnayd Bastoolado ayaa xalay gudaha Magaalada Baydhabo ku dishay wiilkaasi Ardayga ahaa oo isagu xiligii la dilaayay marayay suuqa Xoolaha gaar ahaan isgooska cunaaye halka loo yaqaan ee Magaalada Baydhabo.
Waxaa la sheegay in wiilkaasi ardayga ahaa markii la dilaayay la maqlayayay xabado dhowr ah oo ku dhacaayay wiilkaasi, wuxuuna wiilkaaasi u geeriyooday rasaastii ay ku fureen kooxihii ka dambeeyay dilka Wiilkaasi.
Wiilka la dilay ayaa ilaa iyo iminka aan la ogeyn sababta ka dambeysa dilka loo geestay, iyadoo maamulka Dowladda ee Magaalada Baydhabo ee Gobalkaasi ilaa iyo iminka faahfaahin kama uusan bixin dilka loo geestay wiilkaasi la sheegay inuu ka midka ahaa ardayda Magaalada Baydhabo.